ओलीको मुट्ठीमा पराजुलीको हाँसो !
ARCHIVE, NEWSPAPER » ओलीको मुट्ठीमा पराजुलीको हाँसो !
काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने बाटो कठिन मोडमा पुगेको छ । राजनीतिक दलबलको आडमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने गतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ब्रेक लगाएपछि उनको नियुक्ति रोकिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसहित ६ जनाको नाम सिफासिर गरेको छ । जसमा पराजुली सबैभन्दा बरिष्ठ हुन् । विपक्षी दलका नेता ओलीले अध्ययन गर्नुपर्ने समय माग गरेपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । स्रोतका अनुसार ओलीले पराजुलीको उमेरका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद रहेको भन्दै त्यसलाई पहिले टुंगाउनु पर्ने बताए । विपक्ष दलका नेताले समय माग गरेकाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय लिन नसकिएको उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए । कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पराजुलीकै नेतृत्वमा वसेको न्याय परिषद्को बैठकले उनको माग अनुसार उमेर सदर गरेको थियो ।
पराजुलीले उजुरीमा आफू २०१० साल वैशाख १६ मा जन्मिएको दाबी गर्दै २०३० साउन २१ मा नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा सीडीओ कार्यालयले आफू त्यतिबेला २० वर्ष ३ महिना ५ दिनको भए पनि २१ वर्ष भनेर लेखिदिएकाले उमेर बढेको दाबी गरेका थिए ।
पराजुलीले वास्तविक जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ हो भन्दै दोस्रो नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत सर्वोच्चमा पहिल्यै पेस गरेका थिए ।